Xioami Redmi Qaphela i-5, i-18: i-9 edibeneyo yesikrini kunye ne-aluminium chassis | Iindaba zeGajethi
Xioami Redmi Qaphela i-5, i-18: i-9 edibeneyo yesikrini kunye ne-aluminium chassis
Inkampani yaseAsia IXiaomi ithandwa kakhulu, kokubini kwilizwe labo lokuzalwa nakwamanye amazwe. Kwaye ayisiyonto ingezantsi: inoluhlu oluphakathi lweefowuni ezamkelweyo kuluntu; Ineelaptops eziphakathi kwi-TOP 3 yezona khompyuter zibalaseleyo / kumaxabiso aphezulu; kwaye ikwazibophelele kwiindlela zothutho zasezidolophini ezinje ngesikuta sombane, enye yezona zakhiwe kakuhle kwaye enye yezo zinokuzimela okukhulu (phakathi kwe-20 ukuya kwi-30 yeekhilomitha ngentlawulo nganye).
Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo, iXiaomi ithandwa kakhulu kwicandelo le-smart mobile. Kwaye kungekudala i-smartphone entsha iya kongezwa kwikhathalogu, Xiaomi Redmi Qaphela i5. Njengoko sele ufundile ngomzimba we-TENNA (i-Asia FCC), ekucocweni kwayo kunokwenzeka ukuba wazi ukuba esi sigxina siya kuba nefom yefom ngokungqinelana nolwaziso lwamva nje kwicandelo: isikrini esandisiweyo esinomlinganiselo we-18: 9.
Eli qela liza kuba nekrini, kucatshangelwa 5,99 intshi ngesisombululo esipheleleyo seHD HD + (2160 x 1080 pixels); Oko kukuthi, iya kuba nesisombululo ngakumbi kunemodeli eya kuphumelela kuyo. Kwakhona, i-chassis yayo iya kwenziwa nge-aluminium, into ekunzima ukuyifumana kwiselfowuni ngaphantsi kwama-euro angama-200 Kwaye kuXiaomi yinto ebendibheja kuyo kangangexesha elithile.
Ubukho beeprosesa ezimbini ziyaqwalaselwa. Indawo yokuqala, iMediaTek Helip P25 enee-8 cores kwi-2 GHz frequency ingabandakanywa. Okanye, kwelinye icala, uXiaomi wayenokubheja kwiQualcomm Snapdragon 660 enee-cores ezifanayo kunye nobunzima bewotshi. Kuyabonakala ukuba kuya kubakho izinto ezimbini ezahlukeneyo kwaye sinokukhetha phakathi kwesinye 3 okanye 4 GB RAM; ngokubhekiselele kugcino siya kuba ne-32 okanye i-64 GB yendawo kwaye iya kuhlala iqinisekisiwe ukuba imemori khadi inokusetyenziswa.
Ekugqibeleni, Android 7.1 Nougat Ingayinguqulo yenkqubo yokusebenza efakwe ngaphakathi, kunye nokuba nebhetri ye Iimitha ezingama-4.000 umthamo. Iikhamera zakho? I-12 kunye ne-5 megapixels. Njengoko besesitshilo, nje ukuba ifikelele kumaqumrhu alawulayo, iintetho zayo ezisemthethweni zifika ngexesha elifutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Xioami Redmi Qaphela i-5, i-18: i-9 edibeneyo yesikrini kunye ne-aluminium chassis
Le yindawo entsha yokuwela izilwanyana yeNintendo yezixhobo eziphathwayo